Phillips Inotangisa 4K uye USB-C Monitor, Yakakwana kune Anotakurika Macs | Ndinobva mac
Phillips inotangisa 4K uye USB-C yekutarisisa, yakakwana kune inotakurika Macs
Phillips kuburikidza neMDC yayo inotsigira ichatengesa itsva 32 padiki tarisisa, yakanaka yekubatanidza yedu Mac laptop kune yakakura skrini kana kuishandisa seyechipiri cheki. Iyo Phillips Brilliance 328P6VUBREB modhi ine USB-C Gen 1 sekubatana kwayo kukuruNaizvozvo, yakakwana kune 2015 Mac yeMacBook uye iyo 2016 Mac yeMacBook Pros.
Simba rinoburitswa neLaptop rakaringana kugonesa monita. Kune rimwe divi, ine Gigabit Ethernet chiteshi kubatanidza yakananga kunetiweki. Asi zvakare ine ina USB 3.0 chiteshi.
Zvakare, kana iwe uchida kushandisa komputa iyi nevakuru maMac, izvi hazvizove dambudziko kune iyo Phillips yekutarisa. Isu zvakare tine RatidzaPort 1.4 yekuisa uye maviri HDMI 2.0. Yese yekubatanidza kune chero timu. Asi mumiriri wechikwata zvakanyanya ndiye 4K resolution (3840 x 2160 pixels) HDR ine chitupa, inokwanisa kuwana kupenya kwe 600 cd / m2. Mhinduro yemidziyo iyi ndeimwe yeakaderera pamusika, iine 4ms uye DCI-P3 ruvara nzvimbo ye98%.
Kune rumwe rutivi, iyo yekutarisa inogadziriswa zvizere pakukwirira, kutenderera uye kurereka. Zvakare iyo mutengo weiyi skrini, € 639 Izvo zvinopfuura zvinokwezva kune ese mabhenefiti aanotipa. Kwemakore mashoma anotevera zvinotarisirwa kuti kuita kwakasiyana-siyana kwezvikwata ndiko kuchave kwakanyanya kunyorera. Ndokunge, isu tinogona kutarisira kune-ultra-light michina iri nyore kutakura muhombodo kana musutukesi, uye mushure mekusvika kuhofisi kana kumba, batanidza ivo kune mutariri anoshanda sehombe skrini, kutora mukana weiyo yakakura skrini nzvimbo uye shanda nemaapplication akati wandei pane imwechete desktop.
Kana kune izvi tinowedzera iyo matsva eGPUs izvo zviri kutanga kuwanda muzvitoro zvemakomputa, tinogona kushandura laptop yedu "isina mhosva" kuita yakazara desktop Mac, inogara iine zvikwanisiro zvehardware yekombuta diki-diki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Phillips inotangisa 4K uye USB-C yekutarisisa, yakakwana kune inotakurika Macs